रिपोर्टरले पटक पटक ग,लत नामबाट बोलाएपछी यसरी रिस पोखिन बलिउड नायिका कियारा आडबाणी ले ।। « गोर्खाली खबर डटकम
रिपोर्टरले पटक पटक ग,लत नामबाट बोलाएपछी यसरी रिस पोखिन बलिउड नायिका कियारा आडबाणी ले ।।
बलिउड अभिनेत्री कियारा आडवाणीले आफ्ना सबै प्रशंसकलाई उनको अभिनय र सौन्दर्यले प्रभावित पारेकी छिन। कियाराको फ्यानहरूको फ्यानहरु यति धेरै छन कि उनको लिस्ट मा अटाउन गार्हो छ्। छोटो समयमा नै यिनले प्रशंसकहरूको हृदयमा एक विशेष स्थान राखेकि छिन। तर यसपटक भने प्रशंसकहरूले पनि कियाराको रिस देख्न पाएका छन् ।
कयारा आडवाणी,, हालसालै एक प्रेस सम्मेलनको बेला धेरै नै रिसाएकी थिइन। किनभने कियारा मनपराउँदिनन् कि एक रिपोर्टरले उनलाई ग,लत नामबाट बोलाउएको। एक रिपोर्टले उनलाइ केआरा भनेपछी यिनको दिमाख तात्तिएर आयो र उनी उ संग न,मज्जाले रिसाइन ।
यी दिन कियारा आडवाणीको फिल्म ‘इंदु की ज,वानी’ रिलीज भएको थियो। कियाराले फिल्मको प्रमोट गर्न धेरै प्रेस सम्मेलनहरूमा भाग लिइन्। यसै बीच, कियाराको कन्ट्रोल गर्न नसकेको रिस भाइरल भइरहेको छ।
एक रिपोर्टरले कियाराको नाम ‘कायरा’ भनेर सोधे। यसमा, अभिनेत्रीले भनिन्, ‘तपाईंले मलाई के भन्नु भयो? तपाइले कियारा नामलाइ बिगारेर केआरा र कायर किन भन्नुभयो? कियारा ले भनिन ग,लत नामको कारणले म तपाईंले सोधेको प्रश्नको केही उत्तर
दिन्न यो जवाफ सुनेर रिपोर्टर हेर्या हेरेको हेर्यै भयो।
तालिबानद्वारा पाकिस्तानमा फेरी युद्धको घोषणा
पहिलो र दोस्रो लहर सङ्क्रमण घट्दो, तर विज्ञहरु भन्छन्– यस्तै हो भने तेस्रो लहर थप जटिल हुन्छ